कलियुगका कुरा: म्याद थपको झलनाथलाई झ्याङ्लो
म्याद थपको झलनाथलाई झ्याङ्लो
यी झलनाथ खनालले आत्तिएर संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव दर्ता गरे। मरे नि म्याद थपिन्न भनेर बस्या भए लउ माओवादी र झलनाथ मिलेर संविधानसभा भङ्ग गरी राज्य कब्जा गर्न लाए भनेर काँग्रेसीजनले नै म्याद थप्न भनेर धर्ना दिन थाल्थे। आँफै आतिनाले झलनाथलाई झ्याङ्लो भो...
Tara Thapa Magar भनेसी अब के होला .......................
Murari Raj Mishra सांच्चै, "सांप र छुचुन्द्रो" स्थिति जस्तो पो भो त झलनाथको ????
David Saru Magar त्तेही त भन्छु म यि झल्नाथलाई पनि कहिले गालामा चडकन कहिले के के..........? बिच्ररा खप्पर मा त रहेन छ BUDA कमरेडको........Yestai chala ho bhane ta....................
Peshal Joshi राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले भने, 'संविधान दिन नसक्ने यो संविधान सभाको म्याद जति बढाए पनि अर्थ छैन।'
सुशील कोइरालाले पुनः सोधे, 'संविधान सभा नरहँदाको विकल्प के?' थापाले जवाफ दिए, 'जे पर्छ, त्यही टर्छ।'
Ram Baral ३ , ४ सिटे हरुले त भन्ने त्यही नै हो नि ! जे पर्छ त्यो टर्छ ।
Saroj Dhakal I think Mr Thapa is notaresposible politician.